Metaly sy Nonmetal Laser Cutting Machine
Laser fanapahana fandriana
ISO9001 EC EPA TUV FACTORY Ankatoavina
OEM ODM Tongasoa
Allwinmac manokana amin'ny Laser Cutter SY Laser Cutting Machine famokarana sy fanondranana. Izahay dia miantoka ny fampiharana ny fanavaozana amin'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny famokarana milina laser kalitao.
Orinasa maoderina mandrakotra mihoatra ny 5000m² miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra lehibe, matanjaka R&Ny ekipan'ny teknisianina dia vonona hamaha ny olan'ny mpanjifa avy hatrany .
12 Taona traikefa
Miaraka amin'ny mihoatra 12 taona ezaka sy fanavaozana, aondrana any 80 firenena sy faritra samihafa ary nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifantsika manerana izao tontolo izao.
Fanaraha-maso kalitao avo kokoa
Manomboka amin'ny fividianana akora ka hatramin'ny famokarana, Ny fanaraha-maso kalitao Allwinmac dia manana rafitra fitantanana henjana.
Allwinmac dia mitazona ny sain'ny fampifanarahana ny filan'ny mpampiasa serivisy mandritra ny serivisy. Nanolo-tena hivoatra miaraka amin'ny mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka izahay.
Serivisy tsara indrindra azo
Allwinmac dia manolotra serivisy feno mirakitra lohahevitra toy ny fanapahana laser, fametrahana milina fanoratana tamin'ny laser, hetsika, fanofanana sy fandraisana andraikitra. 7x24 serivice & fanohanana ekipa voatokana hijoro ao ambadiky ny lamosinao.
Allwinmac dia manolo-tena ho mpiara-miombon'antoka amin'ireo mpanao indostrian'ny fanapahana laser sy mpankafy mba hanampy azy ireo hahomby, amin'ny fanomezana fahalalana ara-teknika sy tari-dalana momba ny fanapahana tamin'ny laser sy ny teknolojia sokitra tamin'ny laser .
Momba an'i Allwinmac
Mpitarika ny Laser Cutter & Laser Cutting Machine
Toy ny iray amin'ireo mahery indrindra tamin'ny laser cutter & Mpamatsy mpanao sokitra tamin'ny laser any Shina, Allwinmac dia tao amin'ny indostrian'ny fanapahana laser efa ho akaiky 10 taona.
Fantatsika lalina fa ny kalitao no fanalahidy ho an'ny mpanjifantsika, ary ny maha zava-dehibe ny manome ny kalitao avo indrindra tamin'ny laser fanapahana milina, amin'ny vidiny mora indrindra. Nandritra ny lasa 10 taona, we have worked with countless parts customers.
NY VOKATRA ANTSIKA
Mampiasa fitaovana voasedra kalitao sy teknolojia avo lenta izahay mba hanamboarana ny Laser Cutter sy Laser Cutting Machine mba hiantohana ny faharetany., faharetana sy fahombiazana. Compact famolavolana, fanorenana mafy, Ny fampisehoana avo lenta dia mitovy amin'ny Allwinmac.
Fibre Laser Cutting Machine ,antsoina koa hoe Fibre laser cutter ,milina tamin'ny laser fibre ,fibre laser cnc. Fibre tamin'ny laser fanapahana milina dia tamin'ny laser fanapahana milina izay mampiasa fibre tamin'ny laser mpamokatra ho toy ny hazavana loharano.
CO2 Laser Cutter ,antsoina koa hoe CO2 Laser Cutting Machine .CO2 Laser Cutter dia karazana milina izay mampiasa ny fifindrana eo amin'ny vibration sy ny fihodinan'ny angovo amin'ny molekiola CO2 mba hamoronana hazavana laser hanapahana fitaovana.
Laser Cutter fandriana
Laser Cutting Bed antsoina koa hoe Laser Cutter Bed .Ny Laser Cutting Bed dia fitaovana tamin'ny laser novolavolaina manokana araka ny filàna fampandrosoana ny dokam-barotra., haingon-trano sy indostria mifandraika amin'izany
CCD Laser Cutting Machine mety amin'ny karazana lamba vita pirinty nomerika, anisan'izany ny jersey baolina kitra, akanjo milomano, akanjo mitaingina bisikileta, fitafy ekipa, akanjo lamaody sy vamp vita pirinty sns.
Allwinmac dia mifantoka amin'ny famokarana Laser Cutter SY Laser Cutting Machine ho an'ny karazana indostria isan-karazany fanodinana fitaovana. Mety amin'ny takelaka metaly / takelaka, fantsona metaly / fantsona vy tsy misy pentina, vy karbônina, jiro elektrika, vy tafo, takelaka zinc aluminium, VIRATY, aluminium firaka, titane firaka, VARAHINA, varahina, vy sy fitaovana vy hafa amin'ny hateviny samy hafa. .Also we can give one-stop solution according to customer requirements and existing condition.
Metal Laser fanapahana
Arcylic Laser fanapahana
Fabric Laser fanapahana
Mifandraisa aminay amin'ny rocket ny tetikasanao izao
Allwinmac dia ho mpiara-miasa tsara indrindra ho an'ny mpanapaka laser sy mpanao sokitra laser avy any Shina.